Koonfur Afrika oo qaaday xayiraadaha | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Koonfur Afrika oo qaaday xayiraadaha
Maalin aad u weyn ayay u tahay Koonfur Afrika iyadoo dalkan uu ku jiray mid kamid xayiraadaha ugu adkaa caalamka balse haatan waa la qafiifiyay.
Madaxweyne Ramaphosa waxaa uu ammaanay qaabka dowladiisa ay u wajahayday cudurkan safmarka waxaa uuna muujiyay In rajadu ay wanaagsantahay hase ahaate waxaa uu sheegay in dalkiisu waji cusub hadda galay
Tirada guud ee dhimashada koonfur afrika waa 11 kun balse tallaabo deg deg ah oo cisbitaallada iyo howlwadenada dalkaasi ay sameeyeen ayaa looga hortagay faafitaaka cudurkan, iyada oo dhaqaalaha dalka Koonfur Afrikana uu hoos u dhacay.
Madaxweyne Ramaphosa waxaa uu sheegay in malaayiin qof ah ay cunno la’aan la daristay wuxuuna madaxweynuhu intaasi kudray in sanado badan ay qaadan doonto in dib loo soo dhiso dhaqaalaha Koonfur Afrika.
Madaxweynaha waxaa uu si kulul ula hadlay saraakiisha caafimaadka doonaya inay ka faideystaan cudurkan safmarka, waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa jira walac laga muujinaya in cudurka uu mar labaad soo labakacleeyo, Madxweyne Ramaphosa waxaa uu sheegay in xaalada soo socoto ay ka dernaan doonto tii hore haddii dadka aysan u hoggaansamin shuruucda caafimadka ee looga hortagayo cudurka.
Dhankakale, warbixin rasmi ah oo ay soo saartay xukuumadu ayaa muujisay in fal dembiyeedku ay dalka Koonfur Afrika hoos ugu dhaceen 40% saddexdii bilood ee dalku ku jiray xayiraadda.
Wasiirka booliska ayaa sheegay in noocyada fal-dembiyeedka dhammaantood ay hoos u dhaceen inti u dhaxaysay Abriil iyo Juun, waxaana ka mid ah falalkaasi yaraaday kufsiga iyo guryaha la gubo.
Wuxuu intaa ku daray in xeerkii lagu mamnuucay khamriga ee muranku ka dhashay intii xayiraadda ka hortagga fayraska korona uu gacan ka geystay arintaas, laakiin ay kordheen weerarrada dhaca ah ee lagu qaado dukaamada iibiya khamriga.
Warbixin rasmi ah oo ay soo saartay xukuumadu ayaa muujisay in falal dembiyeedku ay dalka Koonfur Afrika hoos u dhaceen 40% saddexdii bilood ee dalku ku jiray xayiraadda.
Wasiirka booliska ayaa sheegay in noocyada falal dembiyeedka dhamaantood ay hoos u dhaceen intii u dhaxaysay Abriil iyo Juun, waxaana ka mid ah falalkaa yaraaday kufsiga iyo guryaha la gubo.
Koonfur Afrika waxay ka mid tahay dalalka ugu falal dembiyeedka badan dunida, waxaana sidoo kale laga helay kala badh tirada dadka uu ku dhacay cudurka Covid-19 qaaradda Afrika.
In ka badan 500,000 oo qof ayuu ku dhacay cudurku waxaana u dhintay 11,000 oo qof, in kasta oo tifaftiraha arimaha Afrika ee BBC-da Mary Harper, sheegtay in ay sababtu noqon karto habka baadhitaanka dalkaas oo ah mid si sax ah natiijada u soo saara.
Wasiirka booliska, Bheki Cele, ayaa Jimcihii u sheegay warfidiyeenka in warbixintu “muujinayso sawir aan hore loo arag oo wanaagsan oo aad moodo in falal dembiyeedkii fasax ka galeen Koonfur Afrika”.
Wuxuu sheegay in “tirakoobku muujinayo in ay dhamaan falal dembiyeedku aad hoos ugu dhaceen marka la barbar dhigo mudadaas oo kale sannadkii hore siday ahaayeen.”
Waxaanu intaa ku daray in ay “hoos u dhaceen falal dembiyeedka kufsigu 40% saddexdii bilood ee u dambeeyey”.
Waxa sidoo kale hoos u dhacay falal dembiyeedka boobka ah iyo jabsashada guryaha oo ay ku jiraan guryaha la gubo oo iyaguna hoos u dhacay 29%.
Bishii Abriil markii xayiraadda dalka lagu soo rogay, ayaa Cele wuxuu digniin uu bixiyey ku sheegay in boolisku “baabiin doonaan goobaha khamriga sida sharci darrada ah loogu iibiyo”.
Hase yeeshee wasiirka booliska waxa lagu eedeeyey inuu dhiirigeliyey in boolisku ciqaabaan dadka ay ku qabtaan iyaga oo khamri ku cabaya goobaha la isugu yimaad, ilaa xataa eedaha qaarkood tibaaxeen in ay boolisku nin ay ku dhex garaaceen beertiisa qudha ka jareen.
Ganacsatada makhaayadaha iyo baararka khamriga ayaa sidoo kale ka mudaharaaday mamnuucidda khamirga waxaanay sheegeen in amarkaasi dilayo ganacsigooda.
Bishii hore ayaa booliska Koonfur Afrika soo bandhigay warbixin tirokoob guud ah oo ku saabsan falal dembiyeedyada ka dhacay dalka sannadkii 2019/2020.
Sannadkii hore wadarta guud ee ah falalka dhaca baabuurta iyo meheradaha ganacsiga ayaa ka badnayd intii sannadkii ka horeeyey dhacday.
Sidoo kale waxa badnaa falal dembiyeedka kufsiga, dadka iyaga oo sakhraansan gawaadhida wada iyo sidoo kale haysashada hubka sharci darrada ah.
Koonfur Afrika oo qaaday xayiraadaha was last modified: August 16th, 2020 by Admin
Khasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dabeylo ku dhuftay Xeebaha Jubbaland